Fanginana, fitoniana hafahafa… | NewsMada
Fanginana, fitoniana hafahafa…
Mangingin-dratsy ny resaka politika, tato ho ato. Ny mpitondra, toa tsy be resaka sy mikombom-bava amin’izay rehetra miseho. Mandry ivohon’ny vato fa miverina ny fitoniana politika ? « Ny rano milamina, manafim-boay », hoy ny fitenenana malagasy izay. Sao tokoa ka mandrimandry manana aretina eo ! Maro tokoa ireo raharaha eto amin’ny firenena ilàna ny raiamandreny hiteny sy hitondra vahaolana, saingy tsy izay no miseho fa manjaka ny fanginana. Sa izay mangina volamena ? Nefa, « tsy misy ngeza ohatra ny vato, fa rehefa tsy miteny, itaingenan’ny vorona ». Handihizan’ireo mpanatsatso vao hikoropaka irery ka hamaky takotra eo. Mangingina, mikononkonon-javatra sa tsy mahita holazaina intsony, sa maro loatra ireo tokony hitenenana, ka tsy araky ny aina dia aleo mangina? Asa aloha fa tsy misy andrenesam-peo ireo mpitondra isan-tsokajiny. Sasatry ny mamaly ireo fanehoan-kevitra etsy sy eroa sisa atao. Mampieritreritra ny mpanara-baovao izany toe-draharaha izany.
Toa samy mangina tokoa ity na ny mpitondra na ny vahoaka. Miteny ihany ny valalabemandry, fa iva feo ka tsy ren’ny tokony hiantefany. Sao ka izany koa ary ny anton’ny fanginan’ny mpitondra ? Mieritreritra fa milamina ny ambanilanitra ka manakombom-bava na mahita ireo tsy mandeha amin’ny laoniny aza.
Antony ara- bola io, araka ny fijerin’ny sasany azy. Tsy manan-kihetsehana dia aleo mangina. Aleo tokoa aloha tsy miteny toy izay miteniteny foana, toy ny mahazatra ireo mpanao politika hatramin’izay e ! « Tsy resy tsy akory ny olo-mangina », hoy tokoa izay fomba fiteny fialokalofan’ny kely hery izay.
Fa mandra-pahoviana anefa ity fitoniana hafahafa ity ? Toa mitady hampiteny ny moana indray. Izay mihetsika sy mitabataba mamaky fanginana koa, toa tampenam-bava amin’ny vola na vava basy. Dia manjaka ny fiforetana anaty. Raha feno anefa ny siny, tsy maintsy hihoatra ihany ny rano ka hisasasasa hiteraka tabataba ary mety hiafara amin’ny resaka tsy hifankandrenesana indray. Fanginana sy fitoniana hafahafa tokoa izy ity.